Sida Loo Qaado Habka Maskaxda leh ee AI ay u dhimayso Dejinta Xogta Eexda leh | Martech Zone
Xalalka AI ku shaqeeya waxay u baahan yihiin xog-ururin si ay waxtar u yeeshaan. Iyo abuurista xogahaas waxaa ka buuxa dhibaato eexeed oo aan toos ahayn oo heer nidaamsan ah. Dadka oo dhan waxay la ildaran yihiin eex (labadaba miyir iyo miyir la'aanba). Eexdu waxay yeelan kartaa tiro kasta oo qaabab ah: juqraafi, luqad, dhaqan-dhaqaale, jinsi, iyo cunsuri. Eexdaas nidaamsanna waxaa lagu dubey xogta, taas oo keeni karta alaabada AI oo sii waarta oo weynaysa eexda. Ururadu waxay u baahan yihiin hab miyir leh si ay u yareeyaan eexda ku soo qulqulaya xogta xogta.
Tusaalayaal Muujinaya Dhibaatada Eexda
Mid ka mid ah tusaalooyinka la taaban karo ee xogtan ayaa ah eexasho badan oo soo jiitay saxaafad badan oo taban markaas waxay ahayd xalka akhrinta dib -u -bilaabista oo ka doorbiday murashaxiinta ragga dheddigga. Tani waa sababta oo ah xogta qalabka qorista ayaa la sameeyay iyada oo la adeegsanayo dib-u-cusbooneysii tobankii sano ee la soo dhaafay markaasoo inta badan codsadayaasha ay ahaayeen rag. Xogtu waxay ahayd eex, natiijaduna waxay ka tarjumaysay eexdaas.
Tusaale kale oo si weyn loo soo sheegay: Shirkii sanadlaha ahaa ee horumariyaha I/O ee Google, Google waxay la wadaagtay horudhaca aaladda caawinta maqaarka ee AI-ku shaqeeya oo dadka ka caawisa inay fahmaan waxa ka socda arrimaha la xiriira maqaarkooda, timahooda, iyo ciddiyaha. Kaaliyaha maqaarka wuxuu hoosta ka xariiqay sida AI ay u kobceyso si ay uga caawiso daryeelka caafimaadka - laakiin waxay sidoo kale muujisay suurtagalnimada eexda in lagu dhex galo AI ka dib dhaleeceynta in qalabku uusan ku filneyn dadka midabka leh.
Markii Google uu ku dhawaaqay aaladda, shirkaddu waxay xustay:
Si loo hubiyo inaan qof walba u dhiseyno, moodeladayadu waxay ku xisaabtamayaan arrimo ay ka mid yihiin da'da, jinsiga, jinsiga, iyo noocyada maqaarka - laga bilaabo maqaar guduudan oo aan midab lahayn ilaa maqaar madow oo dhif ah oo gubanaya.
Google, Adeegsiga AI si ay kaaga caawiso helitaanka jawaabaha xaaladaha maqaarka ee caadiga ah
Laakiin maqaal ku jira Vice ayaa sheegay in Google uu ku guul daraystay in uu isticmaalo xogta loo dhan yahay:
Si loo dhammeeyo hawsha, cilmi-baarayaashu waxay adeegsadeen xogta tababarka ee 64,837 sawirada 12,399 bukaan oo ku yaal laba gobol. Laakiin kumanaanka xaaladaha maqaarka ee la sawiray, kaliya 3.5 boqolkiiba ayaa ka yimid bukaanno leh noocyada maqaarka ee Fitzpatrick V iyo VI -kuwa matalaya maqaarka bunni iyo bunni madow ama maqaarka madow, siday u kala horreeyaan. Boqolkiiba 90 xogta xogta waxay ka koobnayd dad leh maqaar qurxoon, maqaar madow, ama maqaar khafiif ah oo bunni ah, sida lagu sheegay daraasadda. Natiijadii ka soo baxday sambalka eexda, dhakhaatiirta maqaarka ayaa sheegaya in app-ku uu ku dambayn karo si xad-dhaaf ah ama si hoose loo baadho dadka aan caddaanka ahayn.
Ku xigeenka, Google App-ka Maqaarka Cusub ee Maqaarka Looma Naqdin Dadka Maqaar Madow leh
Google ayaa ka jawaabtay isagoo leh waxay sifeyn doontaa qalabka ka hor inta aysan si rasmi ah u sii deyn:
Qalabkeena caawinta maqaarka ee AI ku shaqeeya ayaa ah gunaanadka cilmi baaris in ka badan seddex sano. Tan iyo markii shaqadayada lagu soo bandhigay Daawaynta Dabiiciga ah, waxaanu sii wadnay horumarinta iyo nadiifinta tignoolajiyadayada iyada oo lagu daray xog-ururin dheeraad ah oo ay ku jiraan xogta ay ku deeqeen kumanaan qof, iyo malaayiin kale oo muuqaalo walaac leh oo maqaarka la daweeyay.
In kasta oo aan rajaynayno AI iyo barnaamijyada barashada mashiinka inay sixi karaan eexdan, xaqiiqadu waa weli: waxay yihiin oo keliya sida smart maadaama xogtoodu nadiif tahay. Cusboonaysiin ku saabsan maahmaahdii hore ee barnaamijka qashinka gudaha/qashinka dibadda, Xalalka AI waxay u xoog badan yihiin sida tayada xogta xogtooda laga bilaabo helitaanka. Sixitaan la'aanteed barnaamij-yaqaannada, xogtan ma laha waayo-aragnimada asalka ah ee ay isku hagaajiyaan - maadaama aysan si fudud u lahayn qaab kale oo tixraac ah.
Dhisidda xogta si mas'uuliyadeedu waa udub dhexaadka dhammaan sirdoonka macmal ah anshax. Dadkuna waa udub dhexaadka xalka.
Mindful AI waa Ethical AI
Eexda kuma dhacdo meel bannaan. Xogta aan anshaxa lahayn ama eexda ahi waxay ka timaadaa qaadashada hab khaldan inta lagu jiro marxaladda horumarinta. Habka loola dagaallamo khaladaadka eexda waa in la qaato mas'uul ka ah, habka bini'aadamka udub dhexaad u ah, in qaar badan oo ka mid ah warshadaha ay ugu yeeraan Mindful AI. Mindful AI waxay leedahay saddex qaybood oo muhiim ah:
1. Mindful AI waa mid ku salaysan Aadanaha
Laga soo bilaabo bilawga mashruuca AI, marxaladaha qorsheynta, baahida dadku waa inay noqdaan xarunta go'aan kasta. Taasina waxay ka dhigan tahay dhammaan dadka - ma aha oo kaliya qayb-hoosaad. Taasi waa sababta horumariyayaashu u baahan yihiin inay ku tiirsanaadaan koox kala duwan oo dad ku saleysan adduunka si ay u tababaraan codsiyada AI inay noqdaan kuwo loo dhan yahay oo aan eex lahayn.
Isku -duwidda xog -ururinta ka socota koox caalami ah oo kala duwan waxay hubisaa in eexda la aqoonsado oo la sifeeyo goor hore. Kuwa ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan, kooxaha da'da, jinsiga, heerarka waxbarashada, asal-dhaqaale-dhaqaale, iyo goobuhu waxay si sahal ah u ogaan karaan xog ururin ka door bida hal qiyam oo ka duwan kan kale, sidaas darteed meesha ka saaraya eexda aan loo baahnayn.
Eeg codsiyada codka Markaad codsanayso hab AI oo miyir leh, iyo ka faa'iidaysiga awoodda barkada hibada caalamiga ah, horumariyayaashu waxay ku xisaabtami karaan qaybaha luqadaha sida lahjadaha iyo lahjadaha kala duwan ee xogta xogta.
Samaynta qaab-dhismeedka naqshadaynta bini'aadamka laga bilaabo bilawga waa muhiim. Waxay ku socotaa waddo dheer xagga hubinta in xogta la sameeyay, la habeeyey, oo la calaamadiyey ay buuxiso rajada isticmaalayaasha ugu dambeeya. Laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah in aadanaha lagu sii hayo inta lagu jiro dhammaan wareegga nololeed ee horumarinta wax soo saarka.
Bini'aadamka ku jira wareegga ayaa sidoo kale ka caawin kara mashiinnada inay u abuuraan waayo-aragnimo AI ka wanaagsan dhagaystayaal kasta oo gaar ah. Markaynu nahay Pactera EDGE, kooxahayada mashruuca xogta AI, ee ku yaal aduunka oo dhan, waxay fahmaan sida dhaqamada iyo duruufaha kala duwan ay u saamayn karaan ururinta iyo hagaajinta xogta tababarka AI ee la isku halayn karo. Waxay haystaan ​​aaladaha lagama maarmaanka ah ee ay u baahan yihiin si ay u calaamadiyaan dhibaatooyinka, ula socdaan, una hagaajiyaan ka hor inta xalka AI ku saleysan uusan noolaan.
Human-in-the-loop AI waa mashruuc "shabakada badbaadada" kaas oo isku daraya xoogga dadka - iyo asalkooda kala duwan ee awoodda xisaabinta degdegga ah ee mashiinnada. Wadashaqayntaan dadka iyo AI waxay u baahan tahay in la aasaaso bilowga barnaamijyada si xogta eexda aysan u noqon aasaas mashruuca.
2. Mindful AI waa mas'uul
Ka masuulka ahaanshaha waa in la hubiyo in nidaamyada AI ay xor ka yihiin eex iyo in ay ku saleysan yihiin anshax. Waxay ku saabsan tahay in laga digtoonaado sida, sababta, iyo meesha xogta laga abuuray, sida ay u habeeyaan nidaamyada AI, iyo sida loogu isticmaalo go'aan qaadashada, go'aamo yeelan kara saameyn anshaxeed. Hal dariiqo oo ganacsigu sidaas ku samayn karo waa inuu la shaqeeyo bulshooyinka aan matalaad lahayn si ay u noqdaan kuwo loo dhan yahay oo aan dhinacna u eexan. Dhinaca tafaasiisha xogta, cilmi-baadhis cusub ayaa iftiiminaysa sida qaab hawleedyo badan oo taxliiliyeyaal badan leh oo ula dhaqmaya sumadaha annotator kasta hawl-hoosaad gaar ah ayaa kaa caawin karta yaraynta arrimaha suurtagalka ah ee ku dhex jira hababka runta ah ee caadiga ah halkaas oo khilaafyada faallooyinka ay sabab u tahay matalaad hoose iyo waa la iska indho-tiraa marka la isu geeyo tafsiirrada hal run oo sal ah.
Aaminaaddu waxay ka timaadaa meherad si hufan loo sharxi karo sida qaabka AI loo tababaray, sida ay u shaqayso, iyo sababta ay ugu taliyaan natiijooyinka. Meheraddu waxay u baahan tahay khibrad u leh deegaanka AI si ay ugu suurtageliso macaamiisheeda inay ka dhigto dalabyadooda AI inay noqdaan kuwo loo dhan yahay oo shaqsiyeed, iyagoo xushmeynaya waxyaabaha muhiimka u ah luuqadda maxalliga ah iyo waaya -aragnimada isticmaaleyaasha oo ka dhigi kara ama jebin kara kalsoonida xalka AI ee hal waddan ilaa tan xigta . Tusaale ahaan, ganacsigu waa inuu u qaabeeyaa codsiyadiisa xaaladaha gaarka ah iyo kuwa gudaha, oo ay ku jiraan luqadaha, lahjadaha, iyo lahjadaha codsiyada ku saleysan codka. Habkaas, barnaamijku wuxuu u keenayaa heer isku mid ah waayo-aragnimada codka ah afaf kasta, laga bilaabo Ingiriisiga ilaa afaf aan si fiican loo matalin.
Cadaalada iyo Kala Duwanaanshaha
Ugu dambeyntii, maskaxda ku hay AI waxay hubisaa in xalalka lagu dhisay xog cadaalad ah oo kala duwan halkaasoo cawaaqibka iyo saameynta natiijooyinka gaarka ah lala socdo lana qiimeeyo ka hor inta uusan xalku tagin suuqa. Annagoo maanka ku hayna oo aan ku darno aadanaha qayb kasta oo ka mid ah horumarka xalka, waxaan gacan ka geysannaa hubinta in moodooyinka AI ay ahaadaan kuwo nadiif ah, eex yar, iyo anshax ahaan intii suurtagal ah.
Tags: aisirdoonka macmaldhicinsets xogta eexdaxog-ururinta eexdaxogta eexdaxog-ururinta eexdadatasetsanshax ahaansirdoonka macmal ah anshaxcaddaaladjuquraafi ahaangoogleafafkamaankacunsuriyaddajinsi ahaanxaqiraaddhaqan-dhaqaalekalsooni
Ahmer Inam waa madaxa AI ee sarkaalka Pactera EDGE, oo ah hormuudka caalamiga ah ee adeegyada dijitaalka iyo tignoolajiyada. Isagu waa waayo -aragnimo Xog iyo Falanqayn khibrad leh oo leh 20+ sano oo waayo -aragnimo ah oo horseed u ah is -beddelka abaabulka iyada oo la adeegsanayo xog, teknolojiyad, nidaamyada macluumaadka, falanqaynta, iyo alaabada xogta.
3-D Suuqgeynta Ku-saleysan Xisaabta (ABM): Sida Loo Keeno Suuqgeyntaada B2B Nolosha